Shih Poo: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Shih Tzu Poodle Mix - Reeddịrị
Shih Poo: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Shih Tzu Poodle Mix
Shih Poo, dịka ị nwere ike iche, bụ Shih Tzu gafere obere Poodle.
Obere, hypoallergenic ma raara onwe ya nye ụlọ ọrụ mmadụ, Shih-Poo nwere ike ịme ezigbo enyi maka onye nwe nwere ịhụnanya nwere ọtụtụ oge iji soro enyi ha nwere ụkwụ anọ nọrọ.
Shih Tzu Poodle Mix nwere ọtụtụ njirimara mara mma maka nkịta ibe gụnyere ọgụgụ isi na ịhụnanya; na-eme ha nnukwu mgbakwunye na ezinụlọ.
O nwere ike isiri gị ike ịkọ ihe nwa nkita a ga-adị ka ya, ebe ọbụna ndị lụrụ di na nwunye nwere ike ịdị iche kpamkpam.
Yabụ, gịnị ka anyị maara banyere nkịta Shih Poo, gịnịkwa bụ ihe omimi? Nọgidenụ na-agụ iji chọpụta ihe ndị ọzọ ...
Shih Poo Dog Nlekọta Nlekọta
Nelghọta Kennel Club
Ọnọdụ Shih Poo
Ndakọrịta na Ezinụlọ
Shih Poo tozuru oke na ọdịdị
Agba na akwa
Ntuziaka Nlekọta Shih-Poo
Nkịta a bụ obe n'etiti Shih Tzu na Miniature Poodle.
Shih Poo bụ obere ìgwè nwere nnukwu obi .
A na-eri ụdị osisi a ka ọ bụrụ nkịta ibe ya iji jiri àgwà mara mma nke ụdị nne na nna ọ bụla nwere:
Ikike na agwa nke Pọọtụ Pọọsụ
Affectionhụnanya na ọdịdị ịhụnanya nke Shih Tzu
Gwakọta nkịta abụọ dị ọcha enweghị ike ịkwado ngwakọta zuru oke nke àgwà mara mma. Nke a pụtara na Shih Poo nwere ike ịnwekwu isi ike ma sie ike na ha (site n'aka nne na nna Poodle).
Ejiri Shih Poo dị ihe dị ka sentimita 8-15 n'ogologo, dị ka obere obere ma nwee ọtụtụ agba.
Shih-Poo na-egwuri egwu ma hụ ụlọ ọrụ mmadụ n'anya nke mere na obi abụọ adịghị ya na ọ ga-erite uru site na ọtụtụ egwuregwu mmekọrịta na ụmụaka toro eto nwere ntụkwasị obi gburugburu obere nkịta.
Amabeghị American Kennel Club, ma ọ bụ kennel Club.
Nke a bụ n'ihi na ha abụghị ndị dị ọcha, agbanyeghị ụfọdụ ụlọ klọb buru ibu na-amata ịdebanye aha nke ụfọdụ obe iji nweta ọrụ na nrubeisi.
Organizationstù ndekọ aha ndị nabatara ha gụnyere:
Otu American Canine Hybrid Club
Nkịta Nkịta nke America, Inc.
Okike Dog Kennel Club
Akwụkwọ mmebe nke onye mmebe
Enweghi klọb klọb ma ọ bụ ụlọ ọrụ nnapụta akọwapụtara, yabụ nke a nwere ike ime ka ịchọta Shih Poo napụta ihe siri ike.
Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ha bụ crossbreed na nso nso a, elekọta mmadụ media weebụsaịtị na-ekpughekarị ndị nwere uche nwere otu mmụọ maka ngwakọ a mara mma.
Dị ka nkịta ndị na-emepụta ihe , o siri ike ịchọpụta ebe oge ozuzu abụọ a si wee bụrụ ụma.
Maka nke a, ọ gaghị ekwe omume ịkọwa ụlọ mkpụmkpụ Shih-Poo izizi.
Otú ọ dị, ọ dị mma iche na ngwakọ a na-ahụ n'anya sitere na onye nkịta na-ewu ewu na-ejide America n'ime afọ iri atọ gara aga na-ahụ poodle ka a na-azụ ya na ụdị anụ ọhịa ndị ọzọ maka ngwakọta na-atụ anya nke àgwà ọma.
Iji ghọta ụdị ikike Shih Poo nwere, anyị ga-eleru anya ma ụdị nne na nna ahụ.
Obere Poodle , Na-eguzo na gburugburu 13-15 sentimita n'ubu, ma bụrụ nkịta nwere ọgụgụ isi.
Emeburu ha na Germany, dị ka ndị enyi ịchụ nta (ịchụ nta ọbọgwụ), ha dabara adaba ugbu a maka ụdị ndụ anụ ụlọ na ụfọdụ oge, ịdị gara gara.
Shih Tzu’s n’aka nke ọzọ bụ sitere na China .
Dị ka ọtụtụ nkịta nkịta , ndị ọgaranya na ndị a ma ama na-akwado ha. N'ihe banyere Shih Tzu nke a bụ ndị eze China ma mesịa bụrụ eze.
Ha batara na United States obere oge mgbe Agha IIwa nke Abụọ gasịrị ma na-azụkarị ha dị ka anụ ụlọ na-eguzosi ike n'ihe.
Ihe Shig Poo Dog Info
Nha 8 ka 15 ″
Ibu ibu 8 ruo 18 pound
Afọ ndụ 10 ruo 15 afọ
Adabara Ndị nwere novice, ndị ezumike nka na ezinụlọ nwere ụmụaka toro eto
Agba dị iche iche Aprịkọt, Black, Nwa na Tan, Brown, Ude, Red Sable, White Ma Parti-Agba.
Iwe Onye na-eguzosi ike n'ihe, onye nwere mmetụta ịhụnanya, onye na-egwuri egwu, onye nwere ọgụgụ isi, nke nwere obi ụtọ
Aha ndị ọzọ Pooshih, Shoodle ma ọ bụ Shihdoodle
Mụtakwuo maka Shih-Poo, budata otu nnomi nke ndu ndi nkita anyi .
Ọ nwere ike isiri anyị ike ịkọ ihe nwa nkịta Shih Poo ga-ele anya - ọdịdị ha bụ ihe omimi ruo mgbe amụrụ ha.
N'ihi na ụdị nne na nna na-eto ngwa ngwa, na-etozu oke na ogo zuru oke n'ime otu afọ, Shih Poo na-eto ngwa ngwa.
Nọmalị ha na-etoru ogo mmadụ naanị n’ime ọnwa iri na abụọ.
Ọnụahịa Shih Poo nwere ike ịdị iche na-adabere na nha na ndị na-azụ anụ, ụdị nwa nkịta Shih-Poo nwere ike ịdị ọnụ n'etiti $ 600 na $ 1,000 USD.
Shih Tzu na-enwekarị nkezi nke gburugburu puppy 5 kwa-awụba n'oké osimiri, ebe Miniature Poodles nkezi atọ kwa litter. N'ịtụle ụdị nne na nna, ụdị ngwakọ a nwere ike iso gburugburu puppy 3 ruo 5.
Ọnwa 3 3.5 4.5
Ọnwa isii 7.5 13
Ọnwa 9 8 iri na ise
Ọnwa iri na abụọ 8 18
Ngwakọta Shih Tzu Poodle bụ ngwakọ nwere ọgụgụ isi nwere ọtụtụ ịhụnanya inye.
Bredị nne na nna nke Shih Poo nwere ogologo akụkọ nke ịbụ abụọ nhọrọ kachasị ewu ewu maka anụ ụlọ ezinụlọ na-eguzosi ike n'ihe.
Shih Poo nwere ezigbo egwuri egwu ma nwekwa ume àgwà na-efe efe nke na-atọ ọchị .
Site na ezigbo akụkọ banyere ịchụ nta na nne na nna Poodle, ị nwere ike ijide n'aka na ọ ga-abụ nke a na-enweghị anụ ọ bụla na nkịta a.
Ọchịchọ ọ bụla ịchụso ihe pere mpe na ihe nzuzu nwere ike bụrụ nnwale ịmalite egwuregwu.
N'iburu nke a n'uche, etoju nke iwe Ha dịkwa oke ala na nkịta a.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ha anaghị emekọrịta ihe nke ọma dị ka nwa nkịta, ụfọdụ nsogbu nchekwa, nke ọgbụgba ma ọ bụ iwe na-egosipụtakarị, nwere ike ibilite.
Shih Poo anaghị eme nke ọma na nke ha ogologo oge, nke a na-abụkarị maka mmetụta ịhụnanya ha, na mgbe mgbe, mkpa!
Mkpakọrịta kwesịrị ekwesị na nwata kwesiri izu oke na igba obula nke ndi n’enweghi nsogbu.
Nkịta ndị a hụrụ ndị enyi ha n'anya ma jiri oge na-agagharị n'èzí.
Shih Poos enweghi ike ịnabata ụmụaka, nke nwere ike ọ gaghị asọpụrụ oke, yabụ kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-ewebata obere ụmụaka nkịta a.
Okenye okenye kwesịrị ilekọta ha anya mgbe ha nọ.
Ọ bụrụ na ha anọwo ekpughere obere umu ka nwa nkita , na a na-elekọta nwatakịrị ahụ mgbe niile ma na-akụzi ịkwanyere ókè nkịta ahụ ùgwù, enweghị nsogbu ọ bụla na a ga-anabatara ụdị nkịta a na ezinụlọ.
Shih Poo ekwesịghịkwa inwe nsogbu idozi ya na anụ ụlọ ndị ọzọ.
Somefọdụ nwere obi ike n'ịhụ ndị enyi ọhụrụ canine karịa ndị ọzọ, ọ bụ ezie na nke a na-esikarị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Na mkpokọta, Shih Poo bụ obere nkịta na-egwuri egwu ma na-egwuri egwu nwere ọtụtụ ịhụnanya iji nye, mana ha nwere ike ịbụ ndị ihere na ụjọ na-atụghị anya ndị bịara abịa.
N'ikwu ya, ọtụtụ ọhụụ ọhụụ na ndị ọhụụ na nkịta dị iche iche na nwata kwesịrị ịgba mbọ hụ na ha tolitere nkịta nwere obi ike ma na-akpa ezi agwa !
Dika umu nne na nna bred ruo ọtụtụ iri afọ dị ka nkịta ndị ọrụ , agwa ọ bụla ekere eke ma ọ bụ mmuo ịchụ nta adịkwaghị anwụ.
Nkịta a ejirila ụlọ ọrụ mmadụ mara ihe ma họrọ nke ahụ karịa ụlọ ọrụ nke enyi canine ọhụrụ! Ha ka na-enwe obi uto ichoputa n'èzí ma nwee obi uto di nkpirikpi ogologo otu ubochi (ozo na nke a).
Shih Tzu Poodle Mix nwere oke ịhụnanya na na - eme ka onye nwe ya sie ike . Ha na-egwuri egwu ma na-erite uru site na ijikọta ihe abụọ ahụ ọnụ; soro onye ha hụrụ n'anya gwuo egwu!
Nkịta Shih Poo nwere ike itolite ihe dịka sentimita 8-15 n'ogologo ma tụọ n'etiti 8-18 lb.
A na-ekewa Shih Poo dị ka obere nkịta nkịta ma nwee ike ịdị n'etiti 8-18lb maka nwoke na nwanyị.
Ha na-atakwa n’agbata sentimita 8-15 ruo nkụ.
Dika nkita a bu uzo ozo, igaghi ejide n'aka na umu nwoke gha ebu ibu ( dị ka ọ dị maka ọtụtụ purebreds ) dị ka ọ ga-adaberekwuo na nketa ihe nketa (were nke ha ụmụ nwanne nne buru ibu, dịka ọmụmaatụ, Sheepadoodles ).
Gafe Shih Tzu na obere Poodle pụtara ụmụ nkịta si n'otu ụlọ ahụ nwere ike ịdị iche kpamkpam dabere na nketa ihe nketa.
N'ikwu okwu n'ozuzu, Shih Poo nwere ihu gbara gburugburu na ntị floppy na ahụ zuru oke.
Dogsfọdụ nkịta Shih Poo nwere okpu ihu , ebe ndị ọzọ nwere agba nke ọma.
Ha nwere aru sara mbara, akwara muscular, ụkwụ dị mkpụmkpụ karịa na ọkwa larịị.
Ha na-enwe obere afụ ọnụ mara mma, nnukwu, anya gbara agba na imi nke na-achakarị uwe ha!
Uwe ha nwere ike bia na otutu agba na nchikota nke gunyere:
Shih Poo agba
Aprịkọt Nwa Nwa na Tan Agba aja aja
Ude Uhie Red Na-acha ọcha Agba-agba
Ọbụna ụmụ nkịta si n'otu ụlọ ahịhịa nwere ike inwe uwe dị iche iche, na-eme ka o sie ike ịkọ ihe nwa nkịta 'na-ahụkarị' ga-adị.
Ha nwere ike ma na-eketa karịa nke kootu ajị anụ si Poodle , ma ọ bụ uwe ogologo ogologo karị nke Shih Tzu; n'ụzọ ọ bụla ha dị o nwere ike ịbụ na ọ ga-adị oke mma!
Otu ihe ekwesịrị ịdeba ama bụ na Shih Tzu nwere uwe na-awụfu ala dị ala, ma mgbe ejikọtara ya na uwe Poodle, nke a pụtara Shih Poo bụ hypoallergenic .
Ha zuru oke maka ndị na-arịa ọrịa nfụkasị ọ bụla nọ n'ebe ahụ bụ ndị nweburu ike ịnweta nkịta n'ihi nsonazụ ha.
Usoro ịkpụzi nkịta a na-adabere kpam kpam na ụdị uwe ha.
Shih Poo ga-erite uru site na ịmezi ndị ọkachamara oge niile n'afọ iji hụ na uwe ha na-adị mma, dozie na enweghị ego.
Ọ bụrụ na uwe ahụ toro ogologo ma kwụ ọtọ (dị ka nke Shih Tzu), ịmịcha ụlọ kwa ụbọchị ga-emerịrị iji gbochie mgbochi.
Dị ka ụdị ọ bụla, ịkpụcha mbọ kwesịrị ime mgbe ọ dị mkpa iji gbochie ha ịdị ogologo na curling.
Ezé nchachacha dị ezigbo mkpa na ụdị a n'ihi nsogbu ọrịa eze dị na nne na nna Shih Tzu .
Ihichapu mgbe niile, ewebata ya na nwata, ga - enyere aka igbochi tartar na - arị elu, ọrịa chịngọm na ezughị oke ịta nka. Uzo ndi ozo di ka abrasive chewing / toy na eze na-ata eze di ma oburu na ichapu ezighi ezi adighi.
Nkịta nke hụrụ ụmụ mmadụ n'anya yana nri ha.
Mmega nkịta a na nri ya chọrọ ya bụ mmezi dị ala, mana ị nwere ike iburu n'uche ego ndị ọzọ achọrọ maka edozi ha oge niile.
Ọ bụrụ na ndị nwe ha nwere obi ụtọ na ego na-eri nke ịzụta na idozi nkịta a, Shih Poo dabara maka ezinụlọ nwere ụmụaka toro eto, ndị mmadụ n'ụlọ ma ọ bụ obere ụlọ na ndị lara ezumike nka.
Nduzi Kalori 600
Elu àgwà akọrọ kibble ugboro abụọ n'ụbọchị bụ ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na nke a nkịta dị ka ha na-ewekarị eze nsogbu gụnyere akaghi aka ezé ọnwụ nke akọrọ nri nwere ike inyere mbuso.
Ọ kachasị mma iji hụ na kibble dabara na afọ ha (ya bụ nwa nkita, okenye ma ọ bụ okenye) ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, a na-ahazi kibble maka obere nkịta (nke a pụtara bisikiiti pere mpe na-eme ka ọ dịrị ha mfe igwu ala).
Ha nwekwara ọchịchọ imebiga ihe ókè (na ịrịọ maka nri mmadụ), ọ dị mkpa inyocha nri ha iji zere ha itinye oke ibu.
Nkeji Nkeji 30 ruo 40
Nkịta a dị ike ma na-egwuri egwu; n'agbanyeghị nke ahụ, ha nwere obere ụkwụ!
Otu Shih Poo tozuru etozu kwesịrị ịga ije maka nkeji 40 kwa ụbọchị iji gbaa ọkụ ha ume ma gbochie ha ịbụ ndị na-agwụ ike na mbibi n'ụlọ.
Abụọ brisk na-ejegharị kwa ụbọchị, otu ga-adịtụ ogologo karịa iji tinye ụfọdụ nyocha, kwesịrị izu oke maka ngwakọ a.
Azụ egwuregwu, jiri bọl ma ọ bụ tug toy , Shih-Poo ga-enwekwa ekele dị ukwuu n'ihi na ha hụrụ ụfọdụ àgwà ụmụ mmadụ / nkịta n'anya.
Ogologo ije ma ọ bụ njem ugwu, n'elu ala siri ike karị, ma ọ bụ ịgba ọsọ adịghị adabara nkịta a ma nwee ike imerụ ahụ karịa ahụike ha.
Gbanyụọ njem, na ọnọdụ echedoro, bụ usoro ahụike ka mma ma nye nkịta Shih Poo gị ọtụtụ ohere inyocha na imeta ndị enyi ọhụrụ.
Nkịta a bụ agbụrụ nwere ọgụgụ isi, mana enwere ike ịnwe isi ike karịa ha!
Ndị nwe ọhụụ agaghị ahapụ ya n'ihi na ọ chọrọ naanị ọzụzụ na ntachi obi na usoro a.
Nkwado dị mma bụ usoro ọzụzụ dị mma ka ụmụ okorobịa a hụrụ nri ha n'anya.
Rewardsgwọ ọrụ a na-akwụ ụgwọ na-abụkarị ihe ịga nke ọma na-eme ka ha kwenye na-akpa agwa.
Dị ka nkịta ọ bụla, ọ dị ha mkpa ka ha nọrọ n'ọnọdụ dị iche iche dị ka o kwere mee n'etiti izu 8 na 16, nke a ga-enyere ha aka inwekwu obi ike na enweghị ụjọ na ọnọdụ ọhụrụ mgbe ha mere agadi.
N'ihi ọgụgụ isi ha, Shih Poo nwere ike na-agwụkarị ike nke nwere ike ibute mbibi.
Iji zere nke a, ọtụtụ kọntaktị mmadụ kwesịrị ịnwe maka oge ka ukwuu, yana ebe onye ọzọ na-azụkọ nri abụghị nhọrọ, ndị na-azụ ihe mgbagwoju anya dị iche iche na kongs wdg. mee ka ụbụrụ ha na-arụ ọrụ .
Agbanyeghị na ndị na - azụ mkpụrụ na - adịbeghị anya, ndị na - azụpụta atụmatụ na ndụ Shih Poo ga - adị n’agbata afọ 10-15.
Enwere ụfọdụ ọnọdụ ahụike nke Shih-Poo dị mwute ikwu na ọ na-adịrịkarị mfe:
Tartar na ezé na-ebute ezé nwere ike ibute ọrịa nke goms nke nwere ike ịmalite ịmalite ịmịcha ezé na ọbụna ihe ize ndụ na-emebi akụrụ, imeju na obi.
Ọrịa thyroid (hyper ma ọ bụ hypo) nwere mgbaàmà dịka uru bara uru, arụghị arụ, ọrịa akpụkpọ na ntutu isi.
Onu ogugu gbara agba na pallet dị nro nke Shih Tzu nwere ike ịpụta na Shih Poo nọ n'ihe ize ndụ nke ụfọdụ nsogbu iku ume, agbanyeghị ịwa ahụ mgbazi na nwata bụ nhọrọ.
Otu ogbe nke efu na ọ joyụ, Shih Poo nwere ike zuru obi onye ọ bụla.
Kwesịrị ekwesị maka ndị agadi na ndị nwere obere ụlọ, Shih-Poo anaghị achọ mmega ahụ na-adịghị agwụ agwụ ma ọ bụ nri aghụghọ.
Ha anaghị eme nke ọma na nke ha ruo ogologo oge, ebe ha na-etolite mgbakwunye siri ike na ndị nwe ha, ọ nwere ike bụrụ obere mkpa maka nlebara anya.
Shih Poo nwere ike ime ezigbo mgbakwunye na ezinụlọ nwere ụmụaka toro eto na ndị nwere ọrụ yana ọbụna ndị nwe ọhụụ bụ ndị na-akwado maka ọzụzụ ọzụzụ na akụkụ ahụ siri ike!
Smalldị obere obere a na-eme ka ọtụtụ ịhụnanya na ịhụnanya banye n'otu ngwungwu ọ ofụ. Gịnị bụ echiche gị? Ka anyị mara n'okpuru.
Pitbull Boxer Mix: Eziokwu Banyere Pooch a Dị Ike
Ọzụzụ Labrador Maka Ndị Nwee Ọhụrụ: Nduzi zuru ezu
mgbada isi chihuahua terrier mix
aha ọma maka nkịta nwata
ihe oyiyi nke imi uhie uhie
lee ka ngwakọta ụlọ beagle na -esi buru ibu